I-Wrightsville Beach Haven East Henderson Street - I-Airbnb
I-Wrightsville Beach Haven East Henderson Street
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Patti Gilley &
U-Patti Gilley & Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukuhlala uphumule kule ndawo ethokomele yolwandle, amafidi angu-300 kuphela ukusuka olwandle, Akukho mgwaqo onqamulayo. Le duplex yaphansi ihlanganisa amagumbi okulala ama-2, amagumbi okugeza angu-1 kanye ne-1/2, i-patio ene-grill, ishawa yangasese yangaphandle, nezindawo zokupaka ezi-2. Isambulela sasebhishi, indawo epholile, izihlalo zolwandle ezi-4, namathawula olwandle angu-4 atholakalayo ukuze asetshenziswe izivakashi. Kutholwe amabhulokhi angu-2 ukusuka ku-Johnny Mercer pier kanye ne-The Palm Room kanye namabhulokhi angu-7 ezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, kanye nesitolo segrosa sakwaRoberts.
4.80 · 168 okushiwo abanye
Indawo enhle enobungani, ungahamba izindawo eziningi, kodwa isiqhingi sinamatekisi enqola yegalofu, kanye nokuqashwa kwamabhayisikili! Ipaki ongahamba ukuya kuyo, inomculo obukhoma wamahhala njalo ngoLwesine ngo-5-7 pakisha ipikiniki futhi ujabulele!
Ibungazwe ngu-Patti Gilley &
Sawubona yimi umnikazi, Patti kanye Jimbo, sihlala phezulu uma kukhona okudingayo!
UPatti Gilley & Ungumbungazi ovelele